Izindaba - Ukuqhathaniswa kokupholishwa kwemabula nge-wax yokuhlanza imabula
Ukugaya imabula nokupholishwa kuyinqubo yokugcina yenqubo yangaphambilini yokwelashwa kwekristalu yokunakekelwa kwamatshe noma ukucutshungulwa kwepuleti lokukhanya kwamatshe. Kungenye yezinqubo ezibaluleke kakhulu ekunakekelweni kwamatshe namuhla, ngokungafani nokuhlanza nokugcotshwa kwemabula ebhizinisini lenkampani yendabuko ebanzi. Umehluko uthi:
Okokuqala, umehluko obalulekile.
I-Marble grinding surface treatment polishing iyisandulela sokucutshungulwa kwendawo yekristalu noma inqubo edingekayo ekucutshungulweni kwamatshe. Umgomo wayo oyinhloko ukusebenzisa ibhulokhi yokugaya ingcindezi eyenziwe ngama-acids we-inorganic, ama-oxide ensimbi nezinye izinto ezinomfutho we-mechanical grinding disc, amandla okugaya ngesivinini esikhulu, ukushisa okungqubuzanayo, indima yamanzi endaweni yemabula ebushelelezi ngokomzimba nangokwengqondo. ukusebenzisana kwamakhemikhali, ukuze indawo yemabula yakhe ungqimba olusha olukhanyayo lwekristalu. Lesi singqimba sekristalu sinokukhanya okukhanyayo, okukhanyayo. Ilute ingafinyelela ku-90-100 degrees. Lolu ngqimba lwekristalu luwungqimba oluguquliwe lwetshe letshe (1-2mm ubukhulu). I-Crystal surface treatment polishing isandiso esingokomzimba sokupholisha i-block block, okungukuthi, ibhulokhi lokugaya libe yimpushana noma engeza inani elincane lempushana ye-resin kanye nengxube yamanzi emshinini wokunakekela itshe onesivinini esiphansi nge-fiber pad ngemva kokugaya phansi ngemva kwenqubo. yokukhanya.
Ukuhlanzwa kwemabula kuyisandulela sokupholishwa kwe-waxing yemabula, ukupholishwa kwe-wax yokuhlanza imabula kuyindlela edumile yokuhlanza imabula kanye nezinyathelo zokuvikela ukugcinwa kokunakekelwa kuma-80s nasekuqaleni kwawo-1990, manje sekulahlekelwe imakethe kanye nokubaluleka kokuba khona. Ingqikithi yawo iwukunamathela okuncane kwe-acrylic resin kanye nama-polymer emulsion e-PE ambozwe phezu kwetshe elisanda kugandaywa (ipuleti elipholishiwe), okuyilokho esivame ukubhekisela kukho njengengcina yamanzi noma i-wax yaphansi. Bese kuthi ngemuva kwesivinini esikhulu, umshini wokupholisha onengcindezi ephansi one-fiber pad friction endaweni yetshe, ukuze ukufakwa kwe-resin kukhanye kakhudlwana inqubo. Ngenxa yokubuyekezwa komkhiqizo, futhi kamuva ukuvela kwe-wax ekhethekile yokukhanya, i-wax-free, njll., lokhu kuhlanganiswa kufana ne-varnish yamafutha okhuni.
Inqubo yokugaya nokupholisha ngaphambi kokunakekelwa kwe-crystal surface ye-marble kuyinqubo yokubambisana ngokomzimba namakhemikhali phakathi kwetshe letshe kanye namakhemikhali. Ungqimba lwekristalu lwetshe letshe luhlanganiswe ngokuphelele lube luphelele ngesendlalelo esingezansi, futhi asikho isendlalelo sokulahla.
Isendlalelo se-wax ebusweni be-wax yokuhlanza imabula yifilimu ye-resin exhunywe endaweni yetshe, engenakho ukusabela kwamakhemikhali ngetshe ngokwalo futhi limbozwe ngokomzimba. Lesi singqimba sefilimu ye-wax singasikwa endaweni yetshe ngefosholo elilodwa.
Okwesibili, ukubonakala komehluko.
I-Marble grinding polishing iyisandulela sokunakekelwa kwetshe, ukukhanya okuphezulu ngemva kokupholishwa kokwelashwa, ukucaca okuphezulu, ukumelana nokugqoka, ukumelana ne-stomp, akulula ukuklwebheka, kuwumfanekiso wangempela wokusetshenziswa kwetshe kanye nokwandiswa kwenani.
I-waxing yetshe ngemuva kwe-luxer ephansi, ukukhanya akucacile, futhi akucacile kakhulu, akuvimbeli ukugqokwa, ukumelana namanzi, ukunwaya kalula, i-oxidation kanye nokuphuzi kwenza ingqikithi yesithombe setshe iyancipha.
Okwesithathu, ukunwetshwa nokusebenza komehluko.
Ngemuva kokunakekelwa okuqhubekayo kwe-crystal layer kanye ne-crystal layer ngemva kokupholishwa kwe-block grinding block (evame ukubizwa ngokuthi ukunakekelwa kwe-crystal surface), ama-pores ayo awavaliwe ngokuphelele, itshe lisengakwazi ukuphefumula ngaphakathi nangaphandle, itshe alikho. izilonda kalula. Ngesikhathi esifanayo kunomphumela othile ongenamanzi, ophikisana nokungcola.
Ngemuva kokukhishwa kwe-marble, ama-pores amatshe avaliwe ngokuphelele, itshe alikwazi ukuphefumula ngaphakathi nangaphandle, ngakho itshe lijwayele izilonda.
Ukunakekelwa okuqhubekayo kwe-crystal layer kanye ne-crystal layer emva kokupholishwa kwe-stone grinding block kulula ukuyisebenzisa, akudingi i-ejenti yokuhlanza ukuhlanza umhlabathi, kungaba ngokuqondile ukugaya ibhulokhi ngamanzi okugaya kanye nokugaya okomile kwezemithi. Ingagqokwa futhi inakekelwe nganoma yisiphi isikhathi, ingasebenza endaweni yangakini. Akukho umehluko omusha kumbala wetshe letshe.
Ngokuqhathanisa ngenhla, singathola ukupholisha imabula kunezinzuzo eziningi. Ukwenza umphumela wokupholisha itshe ube muhle, khetha ithuluzi elihle ledayimane libalulekile.Inkampani ye-Fuzhou Bontai Diamond Toolsinesipiliyoni sokukhiqiza iminyaka engaphezu kwengu-30, singakunikeza zonke izinhlobo zamathuluzi edayimane okhonkolo, i-terrazzo, igwadle, imabula namatshe okugaya nokupholisha amathuluzi. Uma unanoma yimiphi imibuzo, ungangabazi ukusithinta, sizokuphendula phakathi namahora angu-24.